» विश्वका २० देशमा दुई करोड मात्रा पठाइयो कोभ्याक्स, नेपालले कहिले पाउने ?
विश्वका २० देशमा दुई करोड मात्रा पठाइयो कोभ्याक्स, नेपालले कहिले पाउने ?
२०७७ फाल्गुन २२, शनिबार १४:०६
सिन्ह्वा । विश्वका २० देशमा कोभ्याक्सको कार्यक्रम अनुसारका खोपहरु पठाइएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको जानकारीअनुसार कोभ्याक्स कार्यक्रम अनुसारका करिब दुई करोड मात्रा खोप विश्वका विभिन्न २० देशमा पठाइएको छ ।
खोप वितरण अहिले निकै सानो जनसंख्यामा रहेको तर यसलाई पछि बढाइने पनि उनले बताए । उनले भनेका छन् कि अहिलेसम्म यो खोप विश्वका यो कार्यक्रम अनुसारका खोप वितरण गरिएका देशका २ देखि ३ प्रतिशत मात्र नागरिकलाई यो खोपको मात्रा पुगेको पनि उनले बताए ।